Heshiis nabadeed oo lagu gaaray magaalada Tripoli ee Liibiya – The Voice of Northeastern Kenya
Heshiis nabadeed oo lagu gaaray magaalada Tripoli ee Liibiya
Dowlada Liibiya ee ay tageerto qaramada midoobay ayaa sheegtay in caasimadda Tripoli looga dhawaaqay xabad joojin kadib markii heshiis nabadeed ay isla gaareen kooxo iska soo horjeedo oo halkaasi ku dagaalamayay.
Dagaalada muddo ka badan hal toddobaad ka socday magaala madaxda Liibiya iyo duleedkeeda ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 61 qof halka tiro kale oo dhowr ahna ay ku dhaawacmeen.
Howlgalka nabad sugidda qaramada midoobay ee Liibiya ee UNSMIL ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in heshiiska nabadeed uu yahay mid badbaadinayo shacabka iyo hantidooda sido kalena horseedaya in dib loo furo madaarka Mitiga ee ku yaallo Tripoli.
Ghassan Salame oo ah ergeyga qaramada midoobay ka socday ee heshiiska xabbad joojinta waday ayaa hoosta ka xariiqay in heshiiska la gaaray uu sido kale soo afjarayo dagaalka magaalada Tripoli ka socday.
Dalka Libiya ayay rabashado ka taagnayeen tan iyo sannadkii 2011-kii kadib markii la dilay madaxweynihii mudada dheer ka talinayay Mucammar Qaddaafi
← DHGEYSO WARKA HEBEENIMO 8:30PM
DHAGEYSO dabaaldegga cayaaraha loo yaqaano (SOYA) oo lagu qaban doono magaalada Mombasa →